Abshir Axmed Nuur, Ehel Dadkii la Xasuuqay: “Markii Afur loo Fariistay bay Dabka Saareen” – Radio Daljir
Juunyo 15, 2017 2:51 b 4
Magaalada Ballibusle ee Gobolka Mudug waxaa galabta lagu aasay 5 qof oo maata ah oo xalay koox hubaysani midmid ugu dileen deegaanka loo yaqaan Farakalakac.
Waxaa noo suurtagashay in aan waraysano mid ka mid eheladii dadka la xasuuqay. Waa waraysi naxdin iyo argagax badan, sidaas darteed fadlan hubi in aan waraysigaan carruurtu maqlin oo ayan kula dhegaysan.
Alle ha u naxariisto dhammaantood waa geeri xanuun badan dhabtii , ciddii falkaa wuxuushnimada ahna ku kacday alle ha ka abaalmariyo.
illahay ha ka qabto umadiisa sharwadasha aan umada waxba ka galabsan laynaya 24hrs kasta hal halna u ugarsada waa uguska qarsoon runti kuwaas waxayna ubahan yihin in laga difaco shacabka rer badiyaha ah oo ay dhameyeen yaaa alllah umadada u gargaar
illahay ha unaxariisto arxan lawayashana illahay ha ka qabto umadisa